About Us -. Ningbo YINZHOU DONGAO DIE Ukulingisa CO, LTD
Kusukela kuhlonzwa ukuthi yasungulwa ngo 2006, inkampani yethu ibilokhu ezikhethekile R & D kanye yokukhiqiza aluminium ingxubevange ne-zinc ingxubevange imikhiqizo. Inkampani itholakala Yinzhou wesifunda, Ningbo idolobha, isifundazwe Zhejiang. Ahlanganise indawo engaba mayelana 13.500 metres square, endaweni ukwakhiwa mayelana 10,000 square metres.
Sine amayunithi 7 160T ukuze 800T ekamelweni abandayo afe imishini ekubunjweni, futhi amayunithi 3 50T ukuze 168T ekamelweni hot afe imishini ekubunjweni. amayunithi ezingaphezu kuka-20 izikhungo machining futhi CNC lathes, 2sets of ultrasonic yokuhlanza imigqa. Omunye powder umugqa ukukhiqizwa enamathela. Bangaphezu kuka-50sets zonke izinhlobo mechanical ukucutshungulwa Equipments. Ezinjalo njengoba imishini imishini, shot ukuqhumisa umshini, umshini wokucwebezelisa, vibration Izigayo nokunye. Siphinde sibe izinhlobo ukuhlolwa amathuluzi eziphambili, ezifana CMM, spectrometer, futhi womoya sokulinganisa zomculo njll
Imikhiqizo yethu lithunyelwa aseYurophu naseNyakatho Melika. Ikakhulu esetshenziswa imishini industrial, yezimoto, emikhakheni yezokwelapha kanye nezindiza mkhathi izingxenye sezindiza. Abaningi amakhasimende ethu OEM.
Kuyo yonke le minyaka, umqondo kokuba commited ukunikeza imikhiqizo ukuncintisana kanye namasevisi kumakhasimende kuyinto ibhizinisi lethu emishini, "Ubuqotho, Ubuchule, Professional, Win-win" kuyinto izimiso zethu eziwumongo. Ethembele yesayensi, innovation, bese uthinta bezikhali yangaphakathi, ngenkuthalo ukwandisa emakethe, ukuthuthukisa imikhiqizo emisha. Ngemva kweminyaka eminingi nemizamo, inkampani yethu unqobile ukuqashelwa wamabhizinisi eziningi ezidumile ezifuywayo phesheya. Ngakho, inkampani yethu lingathuthukiswa ngokuqhubekayo, enempilo futhi stably.
Ikheli: Shangcheng Village, Tangxi Town, Yinzhou district, Ningbo, China